Ed Bastian: Delta Air Lines na-eme usoro ọzọ iji chebe ọdịnihu anyị | Ụgbọ elu
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Ed Bastian: Delta Air Lines na-eme usoro ndị ọzọ iji chebe ọdịnihu anyị
Ed Bastian: Delta Air Lines na-eme usoro ndị ọzọ iji chebe ọdịnihu anyị
Delta Air Lines 'CEO, Ed Bastian, taa zigara ndị ọrụ ụgbọelu ihe ndekọ a, gbasara mmetụta ọrịa ọrịa COVID-10 metụtara onye na-ebu ya:
Maka: Ndị ọrụ Delta Worldwide
Site na: Ed Bastian, CEO
Isiokwu: Chebe Ọdịnihu Delta
Dika oria ojoo nke COVID-19 (coronavirus) na aga n’ihu n’uwa dum, mmetuta ya na azumahia anyi n’aga n’ihu. Iji nwee nje ahụ, ịkpapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya agbasaala ma na-etinye iwu ọhụụ maka njem, ugbu a gụnyere ihe karịrị mba iri anọ n'ụwa niile.
Nke mbu, Achọrọ m ichetara onye ọ bụla mkpa ahụike na nchekwa gị. Ọ dị mma ịga njem, mana hụ na ị na-eme ihe ndị dị mkpa iji hụ na ahụike gị na nke ndị ahịa anyị na ndị anyị. CDC nwere ụkpụrụ nduzi dị mkpa dị, yabụ biko soro nlezianya niile dị mkpa.
N'isochi ihe mberede mba nke Onye isi ala US kwupụtara, ọchịchọ maka njem adaala nke ukwuu. A na-atụ anya ịnweta ego maka ọnwa Machị ihe ruru $ 2 ijeri karịa afọ gara aga, ebe atụmatụ anyị maka Eprel ga-ada karịa. Ya mere, anyị ga-aga n'ihu na-ebelata oke ikike ikike site na iji 70 pacenti na-ezube ma ọ bụrụ na ọchịchọ amalite ịlaghachi. Ọrụ anyị zuru ụwa ọnụ ga-ewere mbelata kachasị, yana ihe karịrị pasent 80 nke ụgbọ elu belata na ọnwa abụọ na atọ na-esote.
Anyị na ndị White House na Congress na-enwe mkparịta ụka bara uru, ma nwee nchekwube na ụlọ ọrụ anyị ga-enweta nkwado iji nyere aka dozie nsogbu a. Nke ahụ kwuru, anyị ga-aga n'ihu ịme ihe ọ bụla iji nyere onwe anyị aka. Nchekwa ego na-anọgide bụrụ ihe kacha mkpa anyị nwere ugbu a. Ime mkpebi ọsọ ọsọ ugbu a iji belata ọghọm ma chekwaa ego ga-enye anyị akụrụngwa ịlaghachi n'akụkụ ọzọ nke nsogbu a ma kpuchido ọdịnihu Delta.
Anyị na-ebugharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego anyị niile na-emefu ego, gụnyere nnyefe ụgbọelu ọhụrụ ọ bụla, ruo mgbe anyị ga-aka dokwuo anya oge na oke nke ọnọdụ a.
Na mgbakwunye, anyị na-achọ inweta ihe karịrị ijeri $ 4 na ego echekwara naanị n'ọnwa June naanị. Nke a ga-agụnye ego metụtara ikike ka anyị kwụsịtụrụ ife efe, anyị na-atụkwasịkwa mmefu mbelata site na:
All Delta ndị isi ga-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ pasent 50 site na June 30, yana ndị isi na ndị isi njikwa na-ewere 25 pasent belata n'otu oge ahụ.
Dị ka m kwuru n'izu gara aga, egbubila ụgwọ ọnwa m site na pasent 100 site na ọnwa isii na-esote. Ndị isi oche anyị ahọpụtara ịhapụ ịkwụ ụgwọ ha n'ime ọnwa isii sochirinụ.
Ebe ndị ahịa pere mpe na-efe efe, anyị kwesịrị inwe obere oghere n’ọdụ ụgbọelu. N'ime ihe ndị ọzọ, anyị ga-eme ka ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu dị n'Atlanta na ebe ndị ọzọ dịkwuo mkpa nwa oge dịka ihe dị mkpa ma mechie ọtụtụ ndị Delta Sky Clubs ruo mgbe ọchịchọ ga-alaghachi.
Anyị na-ebelata oke ụgbọ mmiri anyị na-arụ ọrụ site na ị na-adọba opekata mpe ọkara nke ụgbọ mmiri anyị - karịa ụgbọ elu 600. Anyị ga-agbakwa ezumike nká nke ụgbọ elu ochie dịka MD-88 / 90s na ụfọdụ nke 767s anyị.
Anyị na-ebelata mmezi mmezi ọ bụla adịghị mkpa iji kwado nchekwa nke ọrụ anyị.
Anyị ebelatala ọtụtụ ndị ọrụ ngo na-emefu, belụsọ ebe ọ dị mkpa iji kwado ọrụ ahụ.
Akwụkwọ afọ ofufo bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma kachasị mma iji nyere aka ka anyị na-agba mbọ ichedo ọrụ ma kwụọ ụgwọ. Achọrọ m ikele onye ọ bụla nwere ike ịkarị 10,000 Delta Delta ndị wepụtala onwe ha ma ana m agba onye ọ bụla ume, ọkachasị ndị ọrụ anyị kwesịrị ka ha chebara nke ọma echiche ma ọ bụrụ na ị ga-apụ oge ezumike maka gị na ezinụlọ gị ugbu a. Biko cheta na ị ga-anọgide na-enwe ohere ahụike gị na uru ụgbọ elu gị mgbe ị na-ahapụ.
Ka anyị na-adọta ọrụ anyị, amaara m na ọ bụ ihe na-egbu mgbu ka anyị kụrụ "bọtịnụ nkwụsịtụ" n'ọtụtụ ihe dị mkpa maka ihe anyị na-emere ndị ahịa anyị na ebumnuche anyị ijikọ ụwa. Mana ihe agaghị akwụsị akwụsị bụ mmụọ ndị Delta, nke na-enwusiwanye ike karịa mgbe ọ bụla ọbụlagodi n'oge a gbara ọchịchịrị. Enweela m ọtụtụ narị ozi ịntanetị na ozi sitere n'aka ndị ọrụ ibe m Delta na izu gara aga, na agụụ gị, ntinye na obi ike anyị n'ọdịnihu ga-akpali akpali n'ezie.
Karịsịa Achọrọ m ikele ndoputa na ndị otu na-ahụ maka ndị ahịa, ndị na-arụ ọrụ dị egwu na-ejikwa olu oku a na-enwetụbeghị ụdị ya na ilekọta ndị ahịa anyị chọrọ ịgbanwe atụmatụ njem ha.
Emehiela - anyị ga-agabiga nke a. Nke a bụ nsogbu ahụike nwa oge na njedebe ga-adị anya, n'oge na-adịghị anya. Elegharala ike nke njem dị ka ọrụ dị mkpa maka ụwa anyị. Ọrụ anyị niile n’ime afọ iri gara aga iji wusie ụlọ ọrụ anyị ike ma gbanwee ụdị azụmaahịa anyị ga-enyere anyị aka nke ọma na izu na ọnwa ndị dị n’ihu, ka anyị na-atachi obi ma, mesịa, gbakee.
Biko gaa n'ihu mee ka ahụike na nchekwa nke ibe anyị na ndị ahịa anyị bụrụ ihe kacha mkpa anyị. Ebe ọ bụla enwere ike, anyị na-agagharị ka ndị anyị na-arụ ọrụ dị anya iji belata ohere nke mbufe. Maka ndị na-arụ ọrụ ahụ, gaa n'ihu na-agbaso usoro nchekwa na nchekwa anyị mgbe niile iji belata ihe ndọpụ uche, ma kpọọ oge nchekwa mgbe ịchọrọ. Biko buru n'uche na ndụ gị iji mee ihe iji chebe onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya, gụnyere ịhapụ ndị mmadụ na ịkwanyere ndị nwere ike ịnwe nsogbu, gụnyere ndị agadi na ndị na-arịa ọrịa. Mara na ọ bụrụ na dọkịta gị gwara gị ka ị nọrọ n'ụlọ n'ihi na enwere ike ikpughere gị COVID-19, a ga-akwụ gị ụgwọ, ị gaghị ewepu oge ahụ n'ụlọ akụ PPT gị.
Amaara m na onye ọ bụla na-eche banyere nchebe nke ọrụ gị na ịkwụ ụgwọ. N'iburu ọnọdụ edoghị anya banyere oge nsogbu a, anyị erubeghị n'otu oge ime mkpebi ọ bụla. Ndị ahụ bụ mkpebi na-egbu mgbu nke ịchọrọ ịtụle. Mana mara na ihe m na-ebute ụzọ bụ ilekọta unu niile. N'ebe a na-enweghị amụma, anyị enweghị ike iwepụ nhọrọ ọ bụla na tebụl, mana usoro ọ bụla nke ga-emetụta ọrụ gị ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ga-abụ ihe ikpeazụ anyị ga-eme, naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji nweta ọdịnihu Delta.
M ga-enwe na aka ọzọ na njedebe nke izu na ndị ọzọ mmelite ka anyị na-agagharị a ọnụ. Daalụ maka ihe niile ị na-emere ibe gị, ndị ahịa anyị, yana maka obodo gị na ndị ị hụrụ n’anya n’oge a enwetụbeghị ụdị ya.Codka jamhuuriyadda soomaaliya
Gịnị Coronavirus? Ikgba ọsọ na America na Arches National Park na Utah
Gọọmentị Switzerland na-akwụsị inyefe visa ịbanye, na-eme ka njikwa ókèala sie ike
SITE NITE Europe ọnụ ahịa nnụnụ mbụ ga-akwụsị n'oge adịghị anya!
Abu Dhabi Tourism na-emekọ ihe na Trip.com Group
Skal International na-anabata Onye isi oche IATA na…
Ngwa ọgwụ ọhụrụ maka ndị ọrịa nwere Follicular...
Ọgwụ antidiabetic ọhụrụ nwere ọgwụgwọ ngwakọta atọ
Ọnụ ahịa ahịa Citrus Pulp, Kekọrịta, maapụ okporo ụzọ n'ọdịnihu...
Ọgwụgwọ nyocha ọhụrụ maka ọrịa kansa ụbụrụ
A manyere ọdụ ụgbọ elu VINCI maka ntinye aka na...
Ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu Toronto ahọpụtala osote onye ọhụrụ...